Macluumaadka mushaarka oo la doonayo in loo gudbiyo Skatteverket bil kasta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Macluumaadka mushaarka oo la doonayo in loo gudbiyo Skatteverket bil kasta
La daabacay onsdag 13 mars 2013 kl 10.02
Xukumada ayaa soo ban-dhigi doonta hindise ku qasbi doona shaqobixiyaha in uu macluumaadka mushaaradka u gubiyo wakaalada canshuuraha ee skatteverket bil kasta halka ay maanta ka tahay sannadkii mar keliya. Sidaas waxaa ogaatey laanta warka ee Ekot.
Macluumaadkaan ay tahay in loo gudbiyo wakaalada canshuuraha ayaa ah mushaaraadka, traktementiga ama gunooyinka habeyn dhaxa ah, canshuurta la celiyo ee gaadiidka, bilersättning, mushaarka fasaxa iyo weliba dhamaan waxyaabaha ay canshuurtu ku waajibtey. Macluumadka ayey noqon doontaa in lagu gudbiyo elektaroonig ahaan balse shaqobixiyaha aan laheyn kombuuter iyo internet ayaa la siin kari doonaa ka dhaafis.
Laakiin arintaan ayey xukumada isku maan dhaafsantahay. Hoogaamiyaha xisbiga Centern oo ahna wasiirada ganacsiga Annie Lööf, qoraal ay ku soo daabacdey asbuucii hore wargeyska Dagens Industri ayey ku sheegtey in aysan qorsheyneynin in ay soo ban-dhigto hindisahaan macluumadka bil kasta loogu gudbinayo skatteverket.
Per Åsling waxuu gudiga dhaqaalaha ee barlamaanka u fadhiyaa xisbiga Centerpartiet.
- Hindisaha waxaa hada ka baaraandegidiisa lagu hayaa guriga xukumad. Waan arki doonaa sidoo noqdo marka la soo gaban gabeeyolaakiin ma aqbali karno in cusleys weyn dusha laga saaro shrikada, gaar ahaan shirkadaha yaryar ee Iswedhen oo aan shaqaaleyn dad, ayuu yeri.
Sidoo kale gudoomiyaha arimaha ganacsiga ee xisbiga Kristdemokraterka Mats Odell ayaan arintaan ku qanacsaneyn.
- Arintaan caqabad ayey ku noqoneysaa qorshahii la doonayey in xeerarka lagu qafiifiyo oo ay dowladda ku howlaneyd. Arintaana waa culeysyo cusub oo fuuli doona shirkadaha yaryar. Marka arintaan waxay hal bacaad lagu lesay ka dhigeysaa shaqadii lagu qafiifinayey sharuucda, ayuu yeri Mats Odell oo ah u qaabilsanaha arimaha ganacsiga ee xisbiga Kristdemokratiga.